कांग्रेस सांसदको प्रश्न– यो सरकार कस्को, माफिया कि दलालको ? — Motivatenews.Com
कांग्रेस सांसदको प्रश्न– यो सरकार कस्को, माफिया कि दलालको ?
काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले अहिलेको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद सिंहले सरकारले माफिया र दलाललाई पोस्ने काम गरेको बताए । लामो समयसम्म तराईका उखु किसानले भुक्तानी नपाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सिंहले भने, ‘सरकारले संवृद्धि भनिरहेको छ । तर कस्को संवृद्धि ? माफिया, दलाल कि बिचौलियाको ? किसानको संवृद्धि आउने संभावना छैन ।’ उनले सर्लाहीका किसानले अझै पनि उखुको भुक्तानी नपाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सर्लाहीका किसानले अझै उखुको मूल्य पाएनन् । सरकारले यो नीतिले किसानको संवृद्धि आउँदैन । छिटो भुक्तानी दिइयोस् ।’
त्यस्तै नेकपाका सांसद घनश्याम खतिवडाले खेतिपातिको सिजन सुरु भएकाले मल तथा बिउको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । ‘खेती लगाउने बेला भयो मलको व्यवस्था गर्नुपर्यो । किसानको जीवनस्तर उठ्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।’